सुझावहरू: स्क्रीनिंग र खस्कने जोखिमको आकलन OMG समाधानहरू
सुझाव: स्क्रीनिंग र गिरने को जोखिम को मूल्यांकन
स्क्रीनिंग र गिरने को जोखिम को मूल्यांकन
65 वर्ष वा पुरानो उमेरका वृद्ध व्यक्तिहरू प्रति वर्ष एकपटक पतनको जोखिममा पर्न पर्दछ। फल्सको जोखिम छिटोको लागि पछिल्लो वर्ष फ्लोरको इतिहासको जाँच गरी समय-समय र चल्ने (TUG) परीक्षण प्रदर्शन गरेर जाँच गर्न सकिन्छ। पतन इतिहास सकारात्मक छ भने उच्च जोखिम अवस्थित छ र TUG सकारात्मक छ (14 सेकेन्ड भन्दा बढीमा); यदि जोखिम इतिहास सकारात्मक छ भने जोखिम मध्यम छ वा TUG सकारात्मक छ; यदि गिरावट इतिहास नकारात्मक छ भने जोखिम कम वा अनुपस्थित छ र TUG नकारात्मक छ (14 सेकेन्ड भन्दा कम मा पूर्ण)। ती खतराको उच्च जोखिम संग, विशेष जोखिम कारक पत्ता लगाउन व्यापक मूल्याङ्कन अनुशंसा गरिन्छ। यो मूल्याङ्कन बहुबिशासन र मल्टीफैक्टेरियल हुनुपर्छ। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको घरको मूल्यांकन पनि समावेश गर्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरूका लागि मध्यम वा तल्लो (वा कुनै) ग्राउण्डको जोखिम, कम से कम निम्न तत्वहरूको सिफारिस गरिएको छ
: - औषधि
: - घरमा खतराहरू
: - पुरानो वा तीव्र रोगहरू
वृद्ध व्यक्तित्वहरूमा बिस्तारै खतराको जोखिम पत्ता लगाउन समाजशास्त्रीय हेरविचार प्रदायकहरूको क्षमता र साधारण स्क्रीडिङ उपकरणहरू र अन्य जानकारी प्रयोग गरेर तिनीहरूको परिमार्जित जोखिम कारकहरू पहिचान गर्न पतनको रोकथामको एक प्रमुख तत्व हो। यो प्रक्रियाले तिनीहरूलाई अनुकूलित हस्तक्षेपहरू प्रदान गर्न अनुमति दिनुपर्छ र यसरी घट्दै आएको घट्दो परिणामको संभावना बढाउँछ।
उनीहरूको प्रभावकारिता बढावा गर्न, यो ती बुजुर्ग मानिसहरूको लागि पतन रोकथाम कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने सिफारिस गरिन्छ जुन फतन गर्ने सबैभन्दा कमजोर हो। यी व्यक्तिहरूले अझ राम्रो-अनुकूलित र अधिक प्रभावकारी लक्षित हस्तक्षेपहरूबाट लाभ उठाउनेछन् (अमेरिकी Geriatrics सोसायटी र अल।, 2001; नेशनल एजिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 2004; गिलिस्पी, गिल्सस्पे, रबर्ट्सन एट अल।, 2003)। जोखिम जोखिमको अन्वेषण गर्न, स्टीयरिङ कमेटीले दुई-चरण स्क्रीनिंग प्रक्रियाको सिफारिश गर्दछ।
सम्पूर्ण स्क्रीनिंग प्रक्रियाले 10 मिनेट भन्दा बढी लिन्छ र वृद्धमा फ्लोको मुद्दाको बारेमा सबै स्वास्थ्य वा समाजशास्त्रीय हेरविचार प्रदायकहरू द्वारा गर्न सकिन्छ। यस सेक्शन मा चर्चा गरिएको स्क्रीनिंग परीक्षण र मूल्यांकन टूल को "अभ्यास मा प्रयोग को लागि" अनुभाग मा विस्तृत छ।
स्क्रीनिंगमा पहिलो चरण तुरुन्तै ब्यालेन्स र गेटको मूल्यांकन गर्न हो। धेरै परीक्षणहरू मोटर प्रकार्य क्षमताको परीक्षण गरेर बिस्तारै जोखिमको खतरालाई स्क्रीनमा डिजाइन गर्न डिजाइन गरिएको छ, जो फ्लाइटका लागि प्रमुख जोखिम कारकहरू मध्ये एक हो (फ्रान्चिन्ग्निनी, टेसेओ एट अल।, एक्सएनमक्स; व्टिटनी, प्लिट एट अल।, एक्सएनमक्स; Chiu, यु-यंग एट अल, एक्सएनमूक्स; लिन, ह्वाङ्ग एट अल।, 1998)। यी परीक्षणहरूमा विभिन्न भित्ता र समापनहरू छन्। उदाहरणको लागि, केही भविष्यहरू "ढोकाहरू" (राम्रो संवेदनशीलता *) भविष्यवाणी गर्न डिजाइन गरिएका छन्, अरू भविष्यहरू "गैर-गिरने" (राम्रो विशिष्टता *); केहि परीक्षण धेरै गेट र सन्तुलन पहलुहरु, अरु मात्र एक मात्र पहलू; केहिले आफ्नो निश्चित व्याख्या व्याख्या गर्नको लागि केहि निश्चित प्रशिक्षण माग्दछन, अरूले प्रयोग गर्न र व्याख्या गर्न सजिलो छन्।
यहाँ, सादगी र तीव्रता दैनिक व्यावसायिक अभ्यासमा पतन जोखिम स्क्रीनिंग को एकीकरण को सुविधा को लागि विशेषाधिकार दिइएको छ। यहाँ प्रस्तावित परीक्षण, टाइम अप र जान (TUG) परीक्षण, प्रयोग गर्न सरल छ र संतोषजनक संवेदनशीलता * र विशिष्टताको * प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, यो घरमा बस्ने वृद्धावस्थामा रहेको मानिन्छ (पोदोसीडोलो र रिचर्डसन, 1991; शमवे-कुक, ब्रावर र अल।, 2000; बिसौफ, स्टेलहेन एट अल।, 2003)। रोगीलाई बिना-आचरणको सहायता बिना आफ्नो कुर्सीबाट उठ्नको लागि सोध्नुहोस्,3मीटर हिँड्नुहोस्, चारैतिर घुमाउनुहोस् र कुर्सीमा एक फरक स्थानमा फर्कनुहोस्। दोस्रो हात (वा स्टपवाइड) 10 सँग घडी प्रयोग गरेर व्यायाम समय। वृद्ध व्यक्तिका व्यक्ति घरमा बस्ने जो सन्तुलन वा गेट ह्रास छैन भने यो व्यायाम 14 सेकेन्ड भन्दा कममा यो अभ्यास पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ। 14 सेकेण्ड भन्दा माथिको समय कम गतिशीलता र गिरने को जोखिम को संकेत गर्दछ।
एक व्यक्ति जसले पहिले नै गिरिएको छ जुन गिरनेको कुनै इतिहास छैन (तुलनात्मक रूपमा, बोरी एट अल।, 1989; नेविट्ट, कमिंग एट अल।, 1989 लुयन्निन, कोसी एट अल।, 1996 ; फ्राइडमैन, मुनोज एट अल।, 2002)। तथापि, वृद्ध व्यक्तिहरू प्रायः उनीहरूको नजिक वा उनीहरूको उपचारशील चिकित्सकहरूलाई (ओ O'Loughlin, 1991) मा बिस्तारै प्रवेश गर्न स्वीकार गर्दैनन्। स्क्रीडिङको दोस्रो चरणले रोगीलाई गत वर्षको पतनको इतिहासमा राखेको छ (अमेरिकी Geriatrics सोसायटी र अल।, 2001)। "के तपाईं गत वर्षको अवधिमा पस्नुभयो? कितने पटक? "यी प्रश्नहरू पतनको सन्दर्भको अन्वेषण (हुनसक्छ जब स्थान, क्रियाकलाप र दबाइको प्रयोग गर्दा घट्यो, परिणामहरू)। यो प्रश्नले मूल्याङ्कनमा थप गहिराइ प्रदान गर्नेछ।
गत वर्षको अवधिमा एक वा बढी फ्लोरिडाको इतिहास हो र सन्तुलन र चाराको क्षति पत्ता लगाइएको छ (TUG भन्दा राम्रो 14 सेकेण्ड सम्म)। व्यक्तिले फेरि पछाडीको उच्च जोखिम प्रस्तुत गर्दछ र सँगसँगै परामर्श र व्याख्या कारकहरू (व्यक्तिगतकृत बहुआयोजनात्मक कार्यक्रम) लाई अनुकूलित अभ्यासको साथ व्यापक मूल्याङ्कन आवश्यक पर्दछ। व्यापक मूल्याङ्कन तल प्रस्तुत गरिएको छ।
व्यक्ति: - गत वर्षको दौडान एकपटक वा बढी घट्यो तर सन्तुलन र चारा कमजोरी (TNG सेन्टरियर 14 सेकेन्ड सम्म) छैन। - गत वर्षको अवधिमा गिरावट छैन तर हालको ब्यालेन्स र गेट हानि गर्दछ (TUG भन्दा राम्रो 14 सेकेण्ड सम्म)। यो व्यक्तिले गिरने को एक मध्यम जोखिम प्रस्तुत गर्दछ वा फेरि गिरने छ। केहि जोखिम कारकहरूको न्यूनतम मूल्याङ्कन सिफारिस गरिन्छ र कुनै पत्ता लागेका जोखिम कारकहरू विशिष्ट हस्तक्षेपहरूसँग सम्बोधन गर्नुपर्छ। मध्यम जोखिम व्यक्तिहरू बहुमुखीयोजना घटाउने रोकथाम कार्यक्रमहरूमा पनि अभिमुख हुन सक्छ।
गत वर्षको अवधिमा पतनको कुनै इतिहास छैन र ब्यालेन्स र गेट हानिको पत्ता लगाइएन (14 सेकेन्ड सम्म TUG इन्फरियर)। यस व्यक्तिले गिरनेको कम (वा कुनै) जोखिम प्रस्तुत गर्दछ। केहि जोखिम कारकहरूको न्यूनतम मूल्याङ्कन सिफारिस गरिन्छ र कुनै पत्ता लागेका जोखिम कारकहरू विशिष्ट हस्तक्षेपहरूसँग सम्बोधन गर्नुपर्छ। कम जोखिमका व्यक्तिहरू पनि स्वास्थ्य पदोन्नति र सुरक्षा कार्यक्रमहरू, वा प्राथमिक रोकथाम कार्यक्रमहरूमा मनपराउन सक्छन् ("कुञ्जी परिभाषाहरू", पी। 22) खतरा जोखिमको लागि हेर्नुहोस्।
12495 कुल दृश्यहरू 12 हेराइ आज